BBC Somali - Warar - Britain oo internetka lagu weeraray
Britain oo internetka lagu weeraray
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 26 June, 2012, 09:36 GMT 12:36 SGA
Madaxa hey'adda sirdoonka gudaha ee Britain, M-I-5, ayaa sheegay in dalka Britain lagu hayo weerar xagga internetka ah oo aad loola yaabay oo lagu bartilmaameedsanayo dowaldda iyo ganacsiga.
Madaxa M-I-5, Jonathan Evans, wuxuu ku tilmaamay in dowlado shisheeye iyo kooxo dambiilayaal ahi ay isku dayayaan in ay ka faaideystaan internetka oo ay xadaan xog xasaasi ah.
Hadal uu jeediyay ayuu ku tilmaamay in isbeddel xoog lihi ka socdo dalalka Carabta, isla markaana dad aan badneyn oo British ahi ay aadeen dalal Carbeed ayaga oo doonaya in tababbar militeri lagu siiyo.
Wuxuu ku tilmaamay in meelo ka mid ah dalalka Carabtu ay noqdeen xaalad aan al Qaacida waxba ka qabin.
Madaxda M-I-5 badiyaa kama hadlaan goobo maxfal ah. Wararka ugu waaweyn